प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र–बाबुरामबीच चुनावी मोर्चा बनाउनेबारे छलफल « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १७ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) बाट निश्काषित नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच चुनावी मोर्चा बनाउनेबारे सहमति भएको छ ।
दाहालसँग यादवको केमेष्ट्री मिलेको छ । दाहाल र नेपाल त २०७५ जेठ ३ गतेबाट गत फागुन २३ गतेसम्म एउटै पार्टीमा थिए । दाहाल अध्यक्ष थिए भने नेता नेपाल वरिष्ठ नेता । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यँुताईदिएपछि उनीहरु आ आफ्नो पार्टीमा फर्किएका थिए । तर, अध्यक्ष ओली पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा फर्कन नमानेपछि नेपाल समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो ।
अहिले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापनाको लागि कांग्रेससँगै एउटै मोर्चामा संघर्ष उत्रिने उनीहरुको सल्लाह छ । नेपालले गठन गर्ने पार्टीमा वामदेव गौतमपनि सहभागी हुने चर्चा छ । लामो समयसम्म लडेर ल्याएको परिवर्तन उल्टाउने काम हुन लागेको भन्दै परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने शीर्ष चार नेताहरुको मत छ । नेता नेपालनिकट विद्यार्थी नेताहरुले नयाँ दल दर्ताको लागि आह्वान दिएको खबर पनि छ । यो संयोगमात्रै हो वा नेता नेपालकै निर्देशमा भएको हो ? भन्नेबारे पनि चर्चा छ ।